စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံအမှုအမှတ် (၉)၊ (၁၀) နှင့် (၁၁) အား အပြီးသတ်အမိန့်များ ချမှတ်ခြင်း
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဦးဝင်းနိုင်အပေါ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမောင်မောင်ဖြူ၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၂)က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်)အား ဦးမောင်မောင်ဖြူက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ်(၉/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။
၂။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းနိုင်၏ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်း သည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးမောင်မောင်ဖြူ၏ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားလွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်းချမှတ်ခဲ့သည့် မူလရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၂)၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပြီး အယူခံလျှောက်ထားသူ၏ အယူခံမှုကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊ အမှုစရိတ် ငွေကျပ်တစ်သိန်းတိတိကို အယူခံ လျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအားပေးစေသည့် အပြီးသတ်အမိန့်ကို ချမှတ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၃။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချီဖွေမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူ [စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ (ကချင်ပြည်နယ်)]မှ ဦးဇခုန်ယိန်းဆောင် အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးခေါဘောမ်၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၄ ရက်နေ့တွင်ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၂)က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးခေါဘောမ်က ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ်(၁၀/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။
၄။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ကချင်ပြည်နယ်၊ ချီဖွေမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒ နယ်အမှတ်(၂)၏ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇခုန်ယိန်းဆောင်သည် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး အယူခံမှု လျှောက်ထားသူ ဦးခေါဘောမ်၏ ကန့်ကွက်လွှာကို တရားစရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်းချမှတ်ခဲ့သည့် မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၂)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက် အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း၊ အမှုစရိတ်ငွေကျပ်တစ်သိန်းတိတိကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအားပေးစေသည့် အပြီးသတ်အမိန့်ကို ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
၅။ ကချင်ပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၅)၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း (တစ်သီးပုဂ္ဂလ)အပေါ် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဦးစံဝေခေါင်လွမ်း၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၂/၂၀၁၅)နှင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၅) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးယောနာ (တစ်သီးပုဂ္ဂလ)၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၄၁/၂၀၁၅)တို့ကို တစ်ပေါင်းတည်း ကြားနာစစ်ဆေးပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၄ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၂)က ချမှတ် ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်း လာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၁/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံ ခဲ့သည်။
၆။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ကချင်ပြည်နယ်၊အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အယူခံမှု လျှောက်ထားသူ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းအား ကချင်ပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)၏ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရခြင်းသည် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုများကြောင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း၊အယူခံမှု လျှောက်ထား ခံရသူ ဦးယောနာ(တစ်သီးပုဂ္ဂလ)သည် ကချင်ပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)တွင် ခိုင်လုံသောမဲအများဆုံးရရှိပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် မူလရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၂) ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီး အယူခံလျှောက်ထားမှုကို စရိတ်နှင့် တကွပယ်ကြောင်း၊ အမှုစရိတ်ငွေကျပ်တစ်သိန်းတိတိကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူများအားပေးစေသည့် အပြီးသတ် အမိန့်ကို ချမှတ်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
၇။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ ၃၀-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ထိ (၂၇)မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့ သော အမှုပေါင်းမှာ (၁၉)မှုရှိပြီးဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Roland Kobia နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဟု နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ လစ်လပ်သွားသော မဲဆန္ဒ နယ်များအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များအရ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ နည်းဥပဒေများ ပြင်ဆင်ရေးကို လွှတ်တော်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက် ပွဲများ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်နှင့် ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်းတို့ကို ပြောကြားပြီးနောက် နောင်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် MoU စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးမည့် အခြေအနေ၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့မှု အတွေ့ အကြုံများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လစ်လပ်သွားသော မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ Civic Education နှင့် Voter Education များကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ နည်းဥပဒေများ ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်း လွှတ်တော်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းတို့ကို ပြောကြားပြီးနောက် ဧည့်သည်တော်အဖွဲ့မှ မေးမြန်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များအောင်မြင်ရေးအတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုရာတွင် အိမ်တိုင် ရာရောက် စမ်းသပ်ကောက်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှု (၄၅)မှုအား အမြန်ဆုံးပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေမှုများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၆) အား စီရင်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ခြင်း
၁။ ချင်းပြည်နယ်၊ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မှ ဒေါက်တာဘမောင်အပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးဖွေအားက ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ်( ၃၆ )အား သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၉ (က)(၂)အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးလှတင့်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် ဦးကျော်သူတို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)က ဆက်လက်စစ်ဆေးကြားနာခဲ့သည်။
၂။ ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဘမောင်သည် ရွေးကောက်ပွဲ၌ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ည) အရ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် ဒေါက်တာဘမောင်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၇၁ (က)အရ ပျက်ပြယ် ကြောင်း ဦးဖွေအားသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ် ကြောင်း ခုံအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ပြီး တရားစရိတ် ငွေကျပ် နှစ်သိန်းတိတိအား လျှောက်ထားခံရသူက လျှောက်ထားသူအားပေးစေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာမှုပေါင်းမှာ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ (၂၇) မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၁၅) မှုရှိပြီးဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လာရောက်လေ့လာ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လာရောက် လေ့လာသော ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်ငယ်ငယ် ဦးဆောင်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမ (၈)ဦးနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၁၅၂)ဦးတို့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက မိတ်ဆက်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများအား ခုံအဖွဲ့(၄)ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ နည်းဥပဒေများကိုလည်း လုပ်ငန်းစဉ် များ ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် Stakeholder အားလုံးပါဝင် သော ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် နောင်တချိန် နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်၍ ကြိုးစားကြစေလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
၎င်းနောက် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဆိုင်ရာများ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဗဟု သုတဖြစ်ဖွယ် အချက်အလက်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများ စစ်ဆေးကြားနာနေမှု တို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
ယင်းနောက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ မေးမြန်းချက်များကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့မှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပြီး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်အမှာ စကားပြောကြားကာ အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁) အား ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) နှင့် ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၈) အား ခုံအဖွဲ့ပြောင်းလဲစစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားမှုအပေါ် (အမိန့်) ချမှတ်ခြင်း
၁။ အမှုမှာ ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၅)မှ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရသူ တအာင်း (ပလောင်)အမျိုးသားပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီစိန်အပေါ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းဆာလူကကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁/၂၀၁၅)ဖြင့် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့သည့်အမှုနှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်နန်းထွေးမှုံက ကန့်ကွက်လွှာအမှု အမှတ်(၄၅/၂၀၁၅) ဖြင့်ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည့်အမှုတို့မှာမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုတည်းမှ ပေါ်ပေါက်သည့် ကန့်ကွက် လွှာအမှုများဖြစ်၍ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ၆၉(င)အရ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၁)တွင် တစ်ပေါင်းတည်း ကြားနာစစ်ဆေးရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အမှု ဖြစ်သည်။
၂။ ထိုအမှုတွင် လျှောက်ထားသူ(၂)ဒေါ်နန်းထွေးမှုံက မိမိ၏ကန့်ကွက်လွှာကို အမျိုးသား လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၉၆(က) နှင့်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အမိန့်၂၃ နည်း၁ အရ ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခဲ့၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့်က ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးစန်းရွှေ နှင့်ဦးဝင်းမော်တို့ ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) ကခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အမှုအား ဆက်လက်ကြားနာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးညီစိန်(တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ) အား ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးစိုင်းဆာလူ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် အမိန့်(စီရင်ချက်)ချမှတ်ခဲ့သည်။
၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဦးပုန်ဘွေ အပေါ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကိုကိုနိုင်က ကန့်ကွက်လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၈) အား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးသောင်းလှိုင်နှင့် ဦးဇော်လင်းမောင်တို့ ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) က ကြားနာ စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
၄။ အဆိုပါကြားနာစစ်ဆေးသောအမှုအား မူလရုံးလျှောက်ထားခံရသူ ဦးပုန်ဘွေ မှ တရားမ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ အရ ယင်းအမှုအား စစ်ဆေးလျက်ရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) အစား အခြား သင့်တော်ရာ ခုံအဖွဲ့သို့ ပြောင်းလဲစစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားမှုအပေါ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံရန် သင့်/မသင့် ကြားနာနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့်က ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် နှင့် ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၅) အားဖွဲ့စည်း၍ (၂၈-၇-၂၀၁၆)နေ့တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက် ကြားနာခဲ့ပြီး ၁၀-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၅)မှ လျှောက်ထားသူ ဦးပုန်ဘွေ (မူလလျှောက်ထား ခံရသူ)၏တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ အရ ရုံးပြောင်းစစ်ဆေးပေးရန် လျှောက်ထားမှုကို ပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၂၄) အား ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်)ချမှတ်ခြင်း
၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကယ်က စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆားမူအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်း၊ လျှောက်ထားခံရသူရရှိသော မဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရရှိသောမဲများ မပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသည်သာ မဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူအဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၂၄) အား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးလှတင့်က ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် ဦးကျော်သူတို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့ (၄) က ဆက်လက် စစ်ဆေးကြားနာခဲ့သည်။
၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆားမူသည် ရွေးကောက်ပွဲ၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (က) (၁)နှင့် (ဋ)တို့အရ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပေါ်ပေါက်သဖြင့် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးဆားမူအား ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခြင်းသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၇၁ (က) (ဃ) အရ ပျက်ပြယ်ကြောင်း၊ ဦးကယ်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်း ခုံအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ပြီး တရားစရိတ် ငွေကျပ်နှစ်သိန်း တိတိအား လျှောက်ထားခံရသူက လျှောက်ထားသူအား ပေးစေခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၇) အား အမိန့်ချမှတ်ခြင်း
၁။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှ ဦးပြူးလွင်အပေါ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးလှဆွေက ကန့်ကွက်လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၁၇)အား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့်က ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးစန်းရွှေနှင့် ဦးဝင်းမော်တို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့ (၁) က စစ်ဆေးကြားနာခဲ့ပါသည်။
၂။ အဆိုပါအမှု၏ အမှတ် (၃) ငြင်းချက်ဖြစ်သော ပဏာမငြင်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ "လျှောက်ထားသူ ဦးလှဆွေက လျှောက်ထားခံရသူ ဦးပြူးလွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်ခဲ့၍ ရရှိခဲ့သည် ဟု ဆိုသော ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ မွေ့လယ်ကျေးရွာမဲရုံအမှတ် (၄)၊ ထယ်လှော်ကျေးရွာ၊ ကျွန်းခုံသာ ကျေးရွာ၊ နှမ်းခါးကျေးရွာ၊ ကံကျေးရွာနှင့် ကန်သာကျေးရွာတို့ရှိမဲရုံများ၊ ထီးလင်းမြို့နယ် အညာဝါးဘင်းကျေးရွာနှင့် ဆောမြို့နယ် နတ်ရဲရွာ၊ ပင်ထောင်ရွာတို့ရှိ မဲရုံများမှ ခိုင်လုံမဲများအား နုတ်ပယ် လိုက်လျှင်ပင် လျှောက်ထားသူ ဦးလှဆွေရရှိသော ခိုင်လုံမဲများထက် ကျော်လွန်နေ၍ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်အရှုံးကို မထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် အမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အကျိုးထူးဖွယ်ရာ မရှိဆိုသည်မှာ မှန်ကန်သည်" ဟု ဖြေဆိုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားခံရသူ ဦးပြူးလွင်အား မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၂) တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် အတည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူ ဦးလှဆွေ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း အမိန့် ချမှတ်လိုက်သည်။
စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၆) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ "ဝ" ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဦးရန်ကျော်အပေါ် "ဝ" အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဆမ်ဆောင်း ကား၏ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်တွင် ရွေးကောက် ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)က ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက် (အမိန့်) အပေါ် ဦးဆမ်ဆောင်းကားက ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၆/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။
၂။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးရန်ကျော်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင်အတည် ဖြစ်သည်ဟု မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို အတည်ပြုကြောင်းနှင့် အယူခံလျှောက်ထားမှုအား စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်သည့် အပြီးသတ် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ၃-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှု (၁၃) မှုအား အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၅) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ "ဝ" ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဦးခွန်ထွန်းလူ (ခ) ဦးဒီကီ အပေါ် "ဝ" အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးစောဖီးလစ်၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်) အပေါ် ဦးစောဖီးလစ်က ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၅/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။
၂။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးခွန်ထွန်းလူ (ခ) ဦးဒီကီအား ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ၊ တရားဝင် အတည်ဖြစ်သည်ဟု မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုကြောင်းနှင့် အယူခံလျှောက်ထားမှုအား စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်သည့် အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့သည်။
စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၄) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ "ဝ" ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဦးကျင်ဝမ်းအပေါ် "ဝ"အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးယောဟန် ၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်) အပေါ် ဦးယောဟန်က ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်း လာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၄/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။
၂။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးကျင်ဝမ်းအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟု မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ကို အတည်ပြုကြောင်းနှင့် အယူခံလျှောက်ထားမှုအား စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်သည့် အပြီးသတ် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၂၈)၊ (၃၇) အား စီရင်ချက် (အမိန့်) များချမှတ်ခြင်း
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကျော်ခင်က ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ပြည် သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ရွှေ အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၂၈/၂၀၁၅)ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးသောင်းလှိုင်နှင့် ဦးဇော်လင်းမောင်တို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) က ကြားနာ စစ်ဆေးပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ရွှေ(ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ)၏ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင်အတည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထား သူ ဦးကျော်ခင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)၏ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားမှုကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသခင်ချိုက မင်းပြားမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစစ်နိုင် အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၃၇/၂၀၁၅) ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးသောင်းလှိုင်နှင့် ဦးဇော်လင်းမောင်တို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) က ကြားနာ စစ်ဆေးပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစစ်နိုင်၏ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင်အတည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးသခင်ချို (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)၏ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားမှုကို စရိတ်နှင့်တကွပယ် သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ရွေးကောက် ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှု (၄၅) မှုကို ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ရာ ၂၉-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ စီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီး (၂၃) မှုနှင့် စစ်ဆေးရန် (၂၂) မှု ကျန်ရှိကြောင်းနှင့် အမှုများအမြန်ပြီးပြတ် နိုင်ရေး နေ့စဉ်ရုံးထိုင် ကြားနာစစ်ဆေးလျက် ရှိသည်။
စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံအမှုအမှတ် (၂) နှင့် (၃) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း
၁။ ကချင်ပြည်နယ်၊ မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေး ပါတီမှ ဦးရားဝမ်ဂျုံအပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစောနွဲ့ခွန်ဆိုင်ခမ်း၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) ကချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်) အပေါ် ဦးစောနွဲ့ခွန်ဆိုင်ခမ်းက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၂/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။
၂။ အယူခံတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ကချင်ပြည်နယ်၊ မချမ်းဘောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးရားဝမ်ဂျုံအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင်ဖြစ်သည်ဟု မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုကြောင်း စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၃။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံဖြိုး ရေးပါတီမှ ဒေါ်လွမ်းလမ်းအပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစံဝေခေါင်လွမ်း၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂)က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အပေါ် ဦးစံဝေခေါင်လွမ်းက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၃/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။
၄။ အယူခံတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒေါ်လွမ်းလမ်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် အတည်ဖြစ်သည်ဟု မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုကြောင်း စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၃) အားကြားဖြတ်အမိန့်ချမှတ်
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအုန်းမြင့် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)မှ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးမြမြမျိုး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈(က)(ခ)(၁)(၂)နှင့် နည်းဥပဒေ ၈၇ အရ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၁၅) ဖြင့်လက်ခံခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးတင်မြင့်နှင့် ဦးမောင်မောင်လေးမြင့်တို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင် သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၃)က စစ်ဆေးကြားနာလျက်ရှိရာ ၂၉-၇-၂၀၁၆ရက် (သောကြာနေ့) တွင် ကြားဖြတ်အမိန့်တစ်ရပ်အား ချမှတ်ခဲ့သည်။
၂။ အမှုမှာလျှောက်ထားခံရသူ ဒေါ်အေးမြမြမျိုးအား စစ်ဆေးမည့်အချိန်တွင် လျှောက်ထား သူ၏ ရှေ့နေမှ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်ကာလအတွင်း၌ ကျောက်တန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မဲရုံ များတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများကို လျှောက်ထားသူ ဦးအုန်းမြင့်၏ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးချစ်မှ တရားလိုပြုလုပ်၍ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သောအမှုများကို ကျောက်တန်းမြို့နယ်တရား ရုံးမှ လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စီရင်ချက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သော အဆိုပါပြစ်မှုများ၏ စီရင်ချက်တာဝန်ခံ မိတ္တူမှန်များသည် ယခုအမှုနှင့် စပ်ဆိုင်သဖြင့် သက်သေခံအဖြစ် လက်ခံခွင့်ပြုပါရန် တရားမ ကျင့်ထုံး ဥပဒေ အမိန့် ၁၃၊ နည်း-၂ အရ လျှောက်ထားတင်ပြလာမှု အပေါ် လျှောက်ထားခံ ရသူ၏ရှေ့နေမှ လျှောက်ထားသူဘက်မှ သက်သေခံအဖြစ်လက်ခံခွင့်ပြုရန် တင်ပြသော ကျောက်တန်းမြို့နယ် တရားရုံး၏ စီရင်ချက်တာဝန်ခံမိတ္တူမှန်များသည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး ၏ စီရင်ချက် အမိန့်များဖြစ်၍ တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့်အညီ စွဲဆိုစစ်ဆေးလျက် ရှိသော ကန့်ကွက်လွှာအမှု တွင် သက်သေခံအဖြစ် လက်ခံခွင့်မပြုသင့်ကြောင်း ကန့်ကွက်လျှောက်ထား တင်ပြလာရာ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၃) မှ လျှောက်ထားသူ၏ တရားမကျင့်ထုံး ဥပဒေအမိန့် ၁၃၊ နည်း-၂ အရ လျှောက်ထားမှုကိုပယ်ကြောင်းနှင့် ရှေ့နေစရိတ်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ တွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စ ရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်း ကော်မတီ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၁၁)ဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ International IDEA နှင့် Democracy Reporting International မှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံ၏ အောင်မြင်သော လွတ်လပ် မျှတသော သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ သမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများ ထဲမှ ထူးခြားသည့် တစ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာ သူများကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး မဲရုံထဲအထိ ဝင်ရောက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ များသည် ရွေးကောက်ပွဲ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှုကို အကောင်းဆုံးဖော်ညွန်းပေးနိုင်သူများ ဖြစ်ပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုသည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အများပြည်သူလက်ခံမှု ပိုမိုမြင့်တက်လာ စေခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားများ၏ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ပိုမို စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ခံ အစိုးရတစ်ရပ်၏ တရားဝင်ဖြစ်တည်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာ စေခြင်းတို့အား ရရှိစေနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲ နေ့ တစ်ရက်တည်းသာ မဟုတ်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့၊ အနိုင်အရှုံး ရလာဒ် ကြေညာပြီးသည်အထိ ရွေးကောက်ပွဲစက်ဝန်းတစ်ခုလုံးကို စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာများကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ပြန်လည်တင်ပြရပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်း အားလုံး၏ အားသာချက် အားနည်းချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိနိုင်ကာ သုံးသပ်မှု ပြင်ဆင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါကြောင်း၊ အစီရင်ခံစာများမှ တွေ့ရှိရသည့် အားနည်းချက် အားသာချက်များကို ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းများအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အခါ အလေးထား စဉ်းစားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေမူဘောင်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရှိရေးနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ရရှိခဲ့သည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ အတွေ့ အကြုံများအရ အနာဂတ်ကာလ ရွေးကောက်ပွဲများကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် မည်သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်များအား အဓိကဦးတည် ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူ ၁၁၄၄၅ ဦးနှင့် နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၁၁၅၃ဦး ကို တရား၀င်အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း၊ လက်တွေ့သဘောအရ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ ပါက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပိုမိုရှိမှာဖြစ်ပြီး နောင်ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ပိုမို ဖိတ်ခေါ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများအပေါ် သုံးသပ်ချက်ကို International IDEA မှ Mr. Gregory Kehailia ကလည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများ (နှိုင်းယှဉ်ရဥပမာများအား တင်ပြခြင်း) ကို DRI မှ Ms. Eva Gil ကလည်းကောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြပါသည်။
၎င်းနောက် ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများမှ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ၊ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ ရေးရာမူဘောင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ၊ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ မဲရုံတွင်းနှင့် မဲရုံပြင်ပ အတွေ့အကြုံများ၊ ဥပဒေ ရေးရာမူဘောင်အား ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအား ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ရမည့် အချိန်ကာလနှင့် ၎င်းအစီရင်ခံစာများအား အသုံးပြုခြင်း၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ များအား စောင့်ကြည့်လေ့လာရာတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခြားဆောင်ရွက် နိုင်သည့် အဆင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တက်ရောက်လာသူများမှ သုံးသပ်အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားကာ အခမ်း အနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။